August 6, 2020 NEWS 7
SAAXDHEER(P-TIMES) – Isimadda dhaqanka ee gobalada Sool, Sanaag & Cayn ayaa maanta kusugan deegaanka Saaxdheer ee galbeedka gobalka Sool, halkas oo heshiis nabdeed loogu kala saxiixi doono 2 beelood oo dhawan ku dagaalamay agagaarka magaalada Buuhoodle.
Isimadda dhaqanka ayaa ku guuleystay in xal nabdeed lagu dhameeyo colaada beelahan walaalaha ah, waxaana arrintan dadaal dheeri ah galiyey Garaad Jamac Garaad Cali iyo Isimadda dhaqanka ee gobaladaas.
Gogoshan heshiiska lagu gaaray, waxaa lafilaya in ay kasoo qeybgalan maanta wafdi kasocda dawlad deegaanka Soomaalida ee Itoobiya oo ay ku jiraan wasiiro iyo taliyayal ciidan, waxaana lagu saxiixi doona madasha heshiiska.
Maleeshiyada labada dhinac ayaa horey loo kala qaday, waxaana hadda laga shaqeynayan sidii xal waara loo gari laha oo ay dhinacyadu garowsadeen.
Qiimaha ay nabaddu leedahay ayay isla qireen waxgaradka labada dhinac, waxayna ka heshiiyeen in wixii dhacay laga gudbo lana abuuro jawi daganansho, wax kastana laga hormariyo nabadgalyadda taas oo muhiim u ah dadka oo dhan.
DHULKA DAWLAD DEEGAANKA SOMALIDA MARKA laga yimaado ABSAME ABSAME iyo Ciise beesha Dhulbahante ayaa ugu dhulwayn hal degmana kuma lahan maxay ku dhacday??
Dhulbahante Wali Waxaay Moodayaan In Dhulkaas Uu Ka Taliyo Dargigii Mingiste
waa nasiib daro,ka danbow gobanimaddii Soomaaliya oo ay 60 sanadood ka soo wareegatay ay maantay,qabyaalade ay noqotay, mid Soomaali hoos gaynaysa,maamulka Ethiopia.
war kuwa qabyaalada ku wardiya ee wax aan iyada ahayn ba aqoon,war noqda dad ilbaxa oo qowmiyada Soomaaliyeed aan kala saar saarin.
umadda Soomaaliyeed dowladnimadeedii waxaa wiiqay,waa qabyaalada jaahiliga ah.
war Ethipia waxa ay ka koobantay in ka badan 80 qowmiyadood,waxa is-kala saar saara oo qabyaalad ay madax martay,waa Soomaalida.
kkkk kkkk markaan sawirkaan kore arkay baan xusuustay hadal uu ka yiri abwaan suldan @boodhari maalinkii waftigii garoowe ka soo kicitimay buhoodle xayiraada lagu saarey. wuxuu yiri doqomadii dhulbahante iyo warsangeli yay snm meel ku xareesatay oo ka sameeneysaa /propaganda coup/ kkkkk kkkkk. suldan @boodhari waxyaalo badan baa laga bartaa anigana waan ka qortaa kkkkk. propaganda coup markaan baaray waan yaabay. sawirkaan kore si fiican u fiirsada waa duqooshin lagu xamaalanaayo oo wuxu muujinaayaa siday idoorku hartiga u kala qeybiyeen. ax ax ax.
War ama wax fiican ku hadal ama is- ka aamus.
Qof waliba qoraal kiisa waa u xor oo waa xuriyada hadalka,hase yeeshee waxaa la fahmi karaa heerka uu xadaarada maantay dunida marayso,in uu wax ka fahamsanyahay iyo in weli badow wax aan qabyaalad ahayn ka hadle karin.
War dunida oo maantay u socota meeraasha hawada sare ayaa kuwo wax aan qabyaalad ahayn aan dunidan kala socon ayey Soomaalidii u badatay,war dadyowga dunida oo kale noqda.walow aysan Sahal ahayn arintaasi,waayo aqoonta ayaa ah Soomaaliya midaad u liidata.
kkkk waa hagaag barofasoore @Abdullaahi Elmi adaa dayaxa dhaafee bal noo wad sheekada kkkkk. meeshaan waxaa tahay ninka ugu aqliga liita oo haddane isu qaba inaad aqoon yahan khatara tahay kkkkk. noo bal balaari warka barofasoore.
VIDEO: Guddoomiye Sanyare oo ka hadlay qarixii Galkacyo hanjabaadna u diray shaqsiyaad la aqoonsaday.
XOG: Muxuu wasiir Xasan Shire Abgaal kala kulmay dekedda Boosaaso oo uu maanta booqday.
DAAWO-Puntland oo qaraxyo waaweyn ku qabatay magaalada Galkacyon & xogo ka soo baxaya.
VIDEO: Puntland oo hadda soo bandhigtay khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay qarixii Galkacyo.
Maxaa ka ka socda magaalada Galkacyo kadib qarax xalay lala beegsaday ciidanka Puntland.
Musharax Cabdikariin Xuseen Guuleed oo weeraray dowladda Madaxweyne Farmaajo.
Senate-ka Maraykanka oo markale u balamay xilka qaadista Donald Trump oo xafiiska wareejiyey
Qarax Muqdisho lagula beegsaday xildhibaano hore oo sababay dhimasho & dhaawac
Madaxda dowlad goboleedyad oo kulamo xasaasi ah isugu imaanaya & qodobo laysla qaatay.
Cidda sugaysa ammaanka goobaha doorashooyinka Soomaaliya oo la shaaciyey.